Weerar Caawa ka dhacay degmo ka tirsan Gobolka Gedo - Awdinle Online
Weerar Caawa ka dhacay degmo ka tirsan Gobolka Gedo
Wararka laga helayo degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi ay ku dagaalameen Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda iyo Xubno kamid ah Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kasib markii Al-Shabaab ay weerareen Saldhiga ay degan leeyihiin Ciidanka Dowladda gaar ahaan Ururka 49-aad Ee ku sugan Degmada Baardheere Ee Gobalka Gedo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Millateriga Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga timid dhinaca Al-Shabaab, isla markaana ay khasaaro ku gaarsiiyeen.
Majirto cid weli xaqiijisay khasaaraha ka dhashay dagaalka Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab ku dhexmaray degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, waxaana mararka qaar la maqlayaa rasaas goos goos ah, sida ay sheegeen dadka ku nool degmadaas.
Previous articleXOG: Madaxweynaha Puntland oo Dubai kula kulmaya Madax ka tirsan Imaaraadka
Next articleSoomaaliya & Cuba oo ka wada hadlay dhaqaatiir u afduuban Al-Shabaab